Izizathu zokufunda ngaphambi kweKlasi
Kubafundi nabazali Iingcebiso kunye neengcebiso
Ikholeji nganye kunye namava e-grad esikolweni ahluke kancinane, kodwa enye into efana nayo ifunda. Uyazi ukuba ikholeji ibandakanya ukufunda okuningi. Qikelela ukuba? Isikolo se-Grad sibi kakhulu. Lindela umthwalo wakho wokufunda ukuya kathathu, ubuncinane, kwisikolo esiphumelele . Ngenxa yesabelo esikhulu sokufunda, unokulingwa ukuba uwele emva kwaye ungafundi phambi kweklasi. Nazi izizathu ezithandathu zokuba kutheni ufanele ugweme isilingo kwaye ufunde phambili kwiklasi.
1. Yenza uninzi lwexesha leklasi.
Ixesha leklasi lixabisekileyo. Qiniseka ukuba unokulandela. Xa ufunda kwangaphambili kwexesha, unako ukuqonda umbutho wentetho. Uya kuba ngcono ukuqonda oko kubalulekile kwaye into engekho (kwaye ngoko uthathe amanqaku asebenzayo).
2. Ukuqonda isihloko kunye noko ungayiqondi.
Ukuba yonke into oyiva kwiklasi yintsha, uza kuyifumanisa njani into oyiqondayo nokuba unemibuzo? Ukuba ufunde ngaphambili ungagxininisa ekuzaliseni izikhala ekuqondeni kwakho ngokunikela ingqwalasela engakumbi kwiindawo ezithile zeengxoxo kunye nokubuza imibuzo.
Uninzi lweeklasi zifuna ubuncinane inxaxheba ethile. Yilungele ukuphendula imibuzo uze uxoxe ngesihloko. Kulula ukuthatha inxaxheba xa uyazi isihloko. Ukufunda kwangaphambili kukunceda uqonde izinto eziphathekayo kwaye kukunika ixesha lokujonga indlela ovakalelwa ngayo kunye neengcamango zakho.
Musa ukubanjwa ungakulungele. Iingcamango zengcamango - ungabanjwanga.
Ukufunda phambi kweklasi kukuvumela ukuba ubonise ukuba ufunde, ukuba uyabakhathalela, kwaye unobulumko. Uyakwazi ukubuza imibuzo emihle kwaye uthathe inxaxheba ngendlela ebonisa ukulungiselela, umdla kunye nokusebenza kwezixhobo.
Zizo zonke iimpawu ezibonakalayo kwiimbono zeengcali.
5. Ukuthatha inxaxheba kumsebenzi weqela.
Iiklasi ezininzi zifuna umsebenzi weqela, ngokuqhelekileyo eklasini. Ukuba ufunde, ulungele kwaye mhlawumbi awuyi kuhlaselwa ebantwaneni bakho, okanye uzuze emsebenzini wabo onzima. Ngaloo ndlela, ukuba ufunde ungakwazi ukuxelela xa iqela lithatha ukujika okungalunganga. Ngokuchasene namanye amaqhinga, umsebenzi weqela osebenzayo ufuna ukulungiswa.
6. Bonisa intlonelo.
Ukufunda ngaphambi kwexesha kubonisa intlonelo kumfundisi kunye nomdla eklasini. Nangona iimvakalelo zabafundi akufanele zibe zizinto eziphambili zokukhuthaza ukuziphatha kwakho, ubudlelwane kunye nobuchule bubalulekile kwaye le ndlela yindlela elula yokufumana ubuhlobo bakho kunye noprofesa wakho ukuya kwisiqalo esihle. Cinga phambili - i-faculty zidla ngokubaluleka kwizixhobo, iingcebiso , ileta kunye namathuba.
Abafundi abaninzi bafumana ukufunda okukhathazayo, umsebenzi omkhulu. Zama ukusebenzisa amaqhinga okufunda njengendlela ye- SQ3R okanye ezinye iingcebiso ezilula zokuphucula ukusebenza kwakho kokufunda .
Inqaku malunga neMasters kunye neeDrari eziPhezulu eziPhezulu
Indlela Yokuqala I-Semester Ngesokudla
Unokufumana njani Uncedo kwiNjingalwazi yakho
Ziyintoni i-Grad School Like?
Sikolo soTshaba? Gwema ezi zi-8 eziqhelekileyo iimpazamo zabafundi
Iingcebiso ezi-8 zokuthatha amanqaku ukusuka ekufundeni kwakho
Ulahlekile Iklasi: Wenzani?
IiPhepha zeSikolo zeeFundo kunye nawe
Ukuphucula ukuFunda kwakho ngokukhawuleza kunye nokuqonda ngeSQ3R Indlela
Iingcebiso ezi-8 zokulungiselela ukuhlolwa kwakho okuqhelekileyo
Iimvelaphi zeDwala ziKhupha kunye neKing King's Landing Information
Iigugu eziguga kwi-Humidor
I-Top ZZ ze-Top Albums
Imivuzo emithathu enkulu kunazo zonke uMax Weber kwiNkcubeko
I-Georgia State University Admissions
Indlela yokusebenzisa iCanoe okanye i-Kayak Bilge Pump
Iingcebiso zePaulophu zoPuphulelo lwabaQaleli
Iimpawu ezihle kakhulu zeNgoma eziNgesiNgesi
Imithetho yeGranger kunye neHranger Movement
I-Outside Out Back Again
Iifoto zeMfazwe Yehlabathi II ePacific
Iimifanekiso eziPhambili ze-Action Action zika-2011
Indlela yokubhala i-Resume ngesiNgesi
Iingongoma ezili-101 zoTitshala zokukhuthaza umntwana
I-Rodeos ephezulu nganye Ifanki kufuneka ibone